काठमाडौं– चीनको वुहान सहरबाट उद्धार गरिएका नेपालीहरुको रेखदेखमा नेपाली सेनाका डाक्टरहरुको एक टोली खटिएको छ। भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा राखिएका उनीहरुको निगरानी नेपाली सेनाको वीरेन्द्र अस्पतालमा कार्यरत कर्णेल डा. मुन थापाले पनि गर्दैछिन्।
बालरोग विशेषज्ञ भए पनि उनी कारोना सम्भावितहरुको रेखदेखमा खटिँदा नौलो र चूनौतीपूर्ण अनुभव लिइरहेकी छन्। नेपालीहरु चीनबाट नेपाल आएदेखि नै सक्रिय थापाले यस्तो विपद्जन्य परिस्थितिका बेला गर्नुपर्ने कार्यहरुको सुझाव दिएकी छिन्।
संसारमा नौला–नौला रोगहरु देखा पर्न थालेको र यस्तो परिस्थिति आइराख्ने तर्फ सचेत गराउँदै उनले थपिन्, ‘हामी पूर्व तयारीमा केही कमजोर छौं। अब तत्कालै स्थायी क्वारेन्टाइनको स्थापना गरिनु पर्छ। आइसोलेसन डिपार्टमेन्टको पनि राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ।’
सरकारको तर्फबाट पूर्व तयारीका कामहरु भएको तर अझ बलियो तयारी हुनुपर्ने उनले बताइन्।
खरिपाटीमा राखिएकाहरुलाई तनावमुक्त राख्न के गरिएको छ ?
डा. थापाका अनुसार चीनबाट ल्याएका नेपालीहरुलाई करिब १७ दिन खरिपाटीको क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्नेछ। त्यस अवधिमा उनीहरु तनावमा आउन सक्ने सम्भावना पनि छ।
उनीहरुलाई तनावमुक्त राख्न मनोरञ्जनका साधनहरुको पनि व्यवस्था गरिएको छ भने मानसिक समस्या नआओस् भनेर मनोचिकित्सक पनि सक्रिय छन्।
‘उहाँहरुमा मानसिक समस्या नआओस् भनेर उहाँहरुको मनोरञ्जनको प्रबन्ध गरिएको छ। खेलकुदका सामग्रीदेखि इन्टरनेटको व्यवस्था पनि गरिएको छ,’ डा.थापाले भनिन्, ‘सबैजना स्वस्थ भएको हुनाले मानसिक तनाव नआउला भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब लामो समयसम्म यतिकै बस्नुपर्ने हुनाले कुनै स्वास्थ्य समस्या, मानसिक समस्या आउन सक्छ भनेर साइको सोसल सपोर्टको टिम पनि खटाइएको छ। हामीले भनेको टाइममा उहाँहरु आउनुहुन्छ।’
आइतबारदेखि सोमबार साँझसम्म कुनै पनि विद्यार्थीमा समस्या नआएको जानकारी दिँदै डा.थापाले भनिन्, ‘उहाँहरु कसैले पनि कुनै समस्या व्यक्त गर्नु भएको छैन। उहाँहरु मानसिक रुपमा तयार भएर आउनु भएको रहेछ। एउटै युनिभर्सिटीको साथीहरुलाई एकै ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौं। परिवारका सदस्यहरु भएको टिमलाई पनि एउटै ब्लकमा राख्ने व्यव्स्था गरेका छौं। त्यसकारण उनीहरुले एक्लोपन वा मानसिक समस्या झेल्नुपर्ने देखिँदैन।’
वुहानबाट उद्धार गर्नुअघि सरकारले क्वारेन्टाइनमा बस्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरुको सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतापत्रमा उनीहरु नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्ने क्वारेन्टाइनमा बस्न मञ्जुर रहेको उल्लेख छ। क्वारेन्टाइनबाट भागेको खण्डमा कानुनबमोजिम कारबाही भोग्न तयार रहेको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।
नेपाल फर्किएका सबैसँग भएको सम्झौतामा औंठाछापदेखि सम्पूर्ण विवरण खुलाइएको छ।
सम्झौतापत्रमा भनिएको छ, ‘म खरिपाटी भक्तपुरस्थित नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्था भएको क्वारेनटाइनमा स्वेच्छाले सहभागी भएको हुँ। म राजीखुसी यस क्वारेन्टाइनमा नेपाल सरकार, सम्बन्धित व्यक्ति तथा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्राप्त निर्देशन, आचारसंहिता र गर्न हुने–गर्न नहुने निर्देशन पूर्णरुपले पालना गर्दै तोकिएको अवधिभर क्वारेन्टाइनमा बस्न मञ्जुर छु।’
सम्झौतापत्रमा कारवाहीको व्यवस्थाबारे भनिएको छ, ‘क्वारेन्टाइनको दौरानमा यदि मैले कुनै पनि किसिमको अटेर गरेमा, आफ्नो, अरुको तथा सरकारी सामानको क्षति पुर्याएमा वा विना अनुमति भागेमा वा भाग्न खोजेमा प्रचलित ऐन नियम कानुनबमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।’
कोरोना विशेषज्ञ नहुँदा कसरी हुँदैछ चेकजाँच ?
नेपालमा कोरोनाकै विशेषज्ञ डाक्टर छैनन्। त्यसैले विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ डाक्टरहरुलाई नेपाली सेनाले खटाएको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय डाक्टर अथवा स्वास्थ्य निकायसँग समन्वय भइरहेको छ कि भन्ने प्रश्नमा डा. थापाले भनिन्,
‘अहिलेसम्म यससँग सम्बन्धित विशेषज्ञ भेटिएको छैन। हामीले जेजति गरिरहेका छौं, विश्व स्वास्थ्य संगठनको गाइडलाइन अनुसार नै गरिरहेका छौं। सेन्ट्रल अफ डिजिज कन्ट्रोललाई पनि आधार मानेका छौं।’
क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीसँग सम्झौता : भागे कारबाही